Azụ nri na ezumike | Azu
Mgbe anyị na-aga ezumike, dịka ọmụmaatụ ugbu a na akwa mmiri ma ọ bụ ọwa mmiri nke dị na Spain ma na-enye ezinụlọ ohere izu ike, na-atụ anya, izu ụka zuru ezu, nke azụ abụghị otu n’ime anụmanụ ndị anyị na-ebukarị na anyị, akwarium gụnyere, inwe ike itinye ya ebe anyị nọ maka ụbọchị ole na ole, na ụzọ ịlaghachi, mee otu ihe ahụ.
Ihe a na-emekarị bụ ịhapụ nri ka ha rie, mana ọ bụghị nri nkịtị ka anyị na-enye azụ ahụ kwa ụbọchị mana ọ nwere ike ịbịa n'ụdị mkpụrụ ọgwụ nke mere obere obere ka ọ gbazee ma, n'ụzọ dị otú a, ha na-ahụ mgbe niile na ha chọrọ ya.
Ndị a ọgwụ nri Enwere ike ịchọta ha n'ụlọ ahịa ma zubere maka ya maka mgbe anyị gara ezumike. Ọ pụtaghị na ị gaghị eri ha nri mana buru n'uche na a na-apịa nri ahụ, ụtọ ya adịghịkwa ka nke a ga-asị na nri ahụ tọpụrụ atọpụ (kwa, ụfọdụ nwere nhọrọ maka ụcha nri; ma ọ bụrụ na ịnweghị Chọpụta mgbe ha na-eri ihe ha na-eme ma ọ bụrụ na ha eri ihe na-adịghị ha mma wee gaa maka nke ọzọ).
Mkpụrụ ọgwụ na-enwekarị dị iche iche oge. Enwere ha maka ngwụsị izu mana enwekwara mbadamba ndị ọzọ buru ibu nke nwere ike ije ozi ogologo oge. Ọ bụrụ na ị maghị, ọ kachasị mma ịjụ otu n'ime ndị njikwa nke ụlọ ahịa ahụ. Pricegwọ ya dịkwa iche dịka akara na oke mkpụrụ ọgwụ ahụ.
Ọbụna ụfọdụ ụlọ ahịa, ma ọ bụ ụfọdụ ndị ọrụ ntụrụndụ, na-echepụta ihe ha chepụtara onwe ha (dị ka nri nkịta na-akpaghị aka) na-enye nri ụbọchị. N'ezie, maka azụ ọ na-esiri ike ịme, ma enwere ike ime ya.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Azu » Azụ azụ » Azu nri na ezumike
Ọ kwesịrị ekwesị maka ụdị azụ ọ bụla? Enwere m azụ azụ 3 na zebra 2, achọpụtara m na ụmụ ntakịrị na-eri naanị ụlọ elu na ụjọ na-atụ ha na ha ga-awakpo ọla edo ahụ maka enweghị nri.
Etu esi icho mma akwarium gi